Eventbrite + Teespring: Ku iibso shaati-tigidhadaada | Martech Zone
Thursday, April 28, 2016 Jimco, Abriil 29, 2016 Douglas Karr
Waxaan shaqeynaa sanadle xafladda muusikada iyo farsamada gudaha Indianapolis sannad kasta. Waa munaasabad aad u wanaagsan oo aan ku soo qaadaneyno kooxo goboleed oo aan fasax ka qaadaneyno si aan ugu dabaaldegno koritaanka gobolka iyo sidoo kale inaan lacag u ururinno Bulshada Leukemia & Lymphoma.
Hay'adayada ayaa ah wakiilka ugu weyn ee munaasabada, ka dibna waxaan caadi ahaan ka helnaa shirkado kale inay daboolaan kharashyada dheeraadka ah. Nasiib darrose, in kastoo, maalgelinta maalgelinta ayaa sida caadiga ah ku timaadda daqiiqadda ugu dambeysa… oo aan waqtiga uga tageynin qorshe aad u badan!
Waad ku mahadsan tahay tiknoolajiyadda, in kastoo! Sannadka soo socda, wax yar ayaanu ka beddelaynaa qorshaynta dhacdooyinka oo waanu kala wareegi doonnaa. Mid ka mid ah fikradda weyn ee aan u hirgelin doonno hubaal waa fursadda aan isugu dareyno iibinta tikidhadeenna oo ay weheliso funaanado dhacdo ah. Eventbrite iyo Teespring leeyihiin set kaliya nidaamka. Kaliya ku dar Barnaamijka Teespring munaasabadaada oo aad xirto funaanadaada.
Iskaashiga Eventbrite ee Teespring wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si dhakhso leh farshaxan ugu soo rarto alaabada, dejiso qiimahaaga, isla markaana isla markiiba aad ka samayso bog internet ah oo ay ka soo qaybgalayaasha iyo taageerayaashu wax ka iibsan karaan. Badeecadaada ayaa markaa loo dallacayaa boggaaga dhacdada.
Mar kasta oo aad rabto in ololahaagu dhammaado, Teespring wuxuu daabici doonaa, xirxiran doonaa oo u geyn doonaa dhammaan amarrada iibsadayaashaada adduunka oo idil. La shaqee ka qaybgalayaashaada oo isku day!
Shaacinta: Taasi waa tanyada Barnaamijka Gudbinta Eventbrite link.
Tags: diiwaangelinta dhacdadadhacdo dhacdociidahabaayacmushtarkaagiiiibinta badeecadahat-shirtxiiqsantigidhada
3 Furaha Maalgashiga Tiknoolajiyadda Suuq-geynta Casriga ah